Ukushisa | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Senza izithombo zokugcina zokugcina izithombo ezivela ema-arcs ngezinto zokumboza
Ngokuvamile abanikazi bomhlaba bafuna ukufaka i-greenhouse. Ezimweni eziningi, ukhetho lwabo luyekezela ngesakhiwo esihlanganisiwe ngento yokuhlanganisa. Kungenziwa ifakwe emhlabathini ovulekile noma endaweni yokushisa. Ukumboza impahla kulula ukushintsha (uma kunesidingo), futhi uhlaka lude. Kungenziwa ngokuzimela.
Izakhamuzi zasehlobo zasehlobo, kanye nabaqalayo kuleli bhizinisi, mhlawumbe bayazi ukuthi kunzima kanjani ukunakekela insimu. Ukhula, ilanga elivuthayo kanye nezifo ezihlukahlukene libulala ingxenye enkulu ngokwanele yesitshalo esizayo, ngakho-ke inkinga yokulondolozwa kwayo ibaluleke nakakhulu. Isibonelo, uyakwazi ukumboza imibhede ukuwavikela ekuthandeni okungalungile kwemvelo?
Abamba ukushisa kuleli zwe ngezandla zabo: ukukhethwa kwendawo, ukwakhiwa nokufakwa kokushisa okushisa
Kulesi sihloko sizoxoxa ngokuthi i-greenhouse iyini, yiziphi izinhlobo zazo futhi, okubaluleke kakhulu, ukuthi ungayakha kanjani ngezandla zakho. Yiziphi izinto ezingadalwa kuzo, ukuthi ungayifaka kanjani kahle, kuphi ukuyibeka nokuthi ungayishisa kanjani? Okulandelayo cishe ngakho. Ukushisa ezweni: indlela yokukhetha indawo? Lapho ukhetha indawo yokushisa, kufanele ucabangele izici eziningi.
Isistimu ye-Autowatering: indlela yokuhlela ukuchelela okuzenzekelayo
Izimila ezikhazimulayo nezimbali ezikhanyayo zidinga ukunakekelwa njalo nokunakekelwa njalo. Ngokuhamba kwesikhathi, ukuchelela okuvamile kuyisimangaliso. Ukukwazi ukunisela ngokuzenzekelayo, okucacile futhi okulula ngokulandelana nokusebenza. Ingabe kufanele sikhethe lolu hlobo lokunisela, cabangela ngezansi.
Ukukhetha ifilimu yezithombo zokugcina izithombo: izinhlobo eziyinhloko zokushisa ifilimu kanye nokukhethwa kwezinqubo
Ayikho impendulo engacacile embuzweni wokuthi iyiphi ifilimu engcono ukuyisebenzisa ukuze kusetshenziswe ukushisa - zonke izinhlobo zinezikhwebu kanye nobubuthakathaka. Lapho sinquma ukuthi yiliphi ifilimu elizokhetha ukushisa okushisa, abalimi abaningi baqondiswa izindleko zokuhlanganisa impahla. Futhi intengo yayo, iyophinde ixhomeke ukuthi ingabe ifilimu engapheli yezithombo zokugcina izithombo noma cha, futhi ngezici zekhwalithi kanye nobuchwepheshe balezi zinto.
I-greenhouse shading net: kungani futhi kanjani ukuthunga ukushisa okushisa
Phakathi nesikhathi sokuguquka kwesimo sezulu, ukuguqulwa kwebusika kube yiqhwa elincane futhi elifushane, futhi ukushisa ekushiseni nokumhlophe kubonakala ngokucacile. Lokhu kuthinta kabi isivuno esizayo. Ngakho-ke, ukusungulwa kwegridi ye-shading kwaba impumelelo entsha ekuxazululeni inkinga. Ukuqokwa kwamanethi okuthungela izitshalo zokugcina izitshalo Abakhiqizi basekhaya nabangaphandle bakhiqiza inetha elikhulu lokudoba ama-ray.
Ukucubungula kusuka ezikhungweni zokugcina zokugcina izithombo ze-phytophthora
I-Phytophthora yigama eliyingozi kuma-agronomists, abalimi nabalimi. Lesi yisifo esiyingozi kakhulu esithinta i-nightshade nezinye izitshalo ezilinywa, njenge-strawberry noma ukhukhamba. Njengomthetho, izitshalo eziphethwe yizimo eziphuthumayo azitholakali, indlela kuphela yokuphuma ukubhubhisa.
Ukuvuthwa okuzenzakalelayo kwe-greenhouse: i-actuator esishisayo enezandla zakho
Uma une-greenhouse ekhanda lakho lehlobo, okuningi kuyoxhomeka ekuphuculeni umoya. I-ventilation yenza izimo ezikhululekile kakhulu zokuphila kwezitshalo, ilawula umswakama kanye nokushisa kwomoya. Uma umoya ungahambisani nesibamba sokushisa, izinga lokushisa liyoqhubeka likhuphuka noma liwe.
Indlela yokwenza ukushisa okushisa ngephahla lokuvula ngezandla zakho
Abalimi abaningi kanye nabalimi bacabanga ukuthi kwakhiwa ukushisa okushisayo endaweni yabo. Ukwakhiwa okunjalo okulula kuzokusiza ukukhulisa izithombo ezindaweni ezibandayo, ube nemifino etafuleni unyaka wonke, noma, uthengise imifino noma izithelo ezidinga isikhathi sebandayo. Ukuhlola izindleko zokushisa okuphelile ezitolo, isifiso sokuthenga ngaso leso sikhathi sishabalale, noma kunjalo, uma uthanda ukwenza konke wena futhi unesikhathi esanele, khona-ke ungakha isitfombe esibamba ukushisa wena.
I-greenhouse "Utamatisi wesignali": umhlangano wezandla zabo
Noma ubani ohamba kancane noma ohlotshaniswa nokulima imifino uyazi ukuthi noma yisiphi isitshalo siqala ukukhula kangcono futhi sisheshe endaweni evikelekile, lapho izovikelwa khona emoyeni, isichotho, namazinga okushisa aphansi. Okulandelayo, sicabangela ukushisa okushisa okushiwo "Utamatisi wesignali" avela kumenzi we-LLC "Krovstroy" iDedovsk. Izici zobuciko kanye nemishini ye-greenhouse Greyhouse ye-PVC "I-Signor Tomato" isetshenziselwa ukwakha izimo ezihle kakhulu zezitshalo, okuzovumela ukuba uthole isivuno esikhulu semifino nezithombo.
Ukusetshenziswa kwe-non -ven cover material agrospan engadini
Ukuze yonke imizamo esetshenziswe ekuvuneni esikhathini esizayo ayiyona ize, izakhamuzi eziningi zasehlobo kanye nabalimi basesha amadivaysi ekwakheni i-microclimate enhle. Ngokuvamile, izinto ezihlukahlukene zokugqoka zisetshenziselwa le njongo, ezenziwe ngokukhethekile kulezi zinhloso. Ngosizo lwabo, kuyoba nokuthuthukiswa okusebenzayo kwezitshalo, okuzoqhubeka nokuholela ekuvuneni okunenzuzo.
Indlela yokwenza i-arc ye-greenhouse ngezandla zakho
Namuhla, abalimi abaningi nabalimi bayaqiniseka ukuthi kulula futhi kulula ukusebenzisa izithombo zokugcina izithombo. Izithombo ezitshalwe kulezo zokugcina ezincane, kubonisa imiphumela emihle ekuhlumeni, zikhula futhi zikhule kangcono. Ngaphezu kwalokho, izitshalo zingcono ukushintshwa kwenhlabathi, zikhuni. Kulesi sihloko sizoxoxa ngama-arcs asebenza njengesisekelo somklamo: yiziphi izinto ezingasetshenziswa kanye nokwakhiwa kwe-mini-greenhouse kokuseduze.
Indawo yokushisa ngaphandle kokuphazamisa: indlela yokwakha eyakhelwe ifilimu, i-hoop nezinkuni
Indlela yokukhula nokuvuna ukuvunwa okucebile kwisayithi lakho bese uzenzele ukushisa kwamakhukhamba ngezandla zakho - ungafunda kule ngqungquthela, lapho izithombe zezindlela ezihlukahlukene zichazwe ngokucacile (njengesibonelo sabaqalayo). Izidingo zokushisa kwama-ukhukhamba Ukuze uhlele umsebenzi wakho ngezigaba futhi wenze ukushisa ngezandla zakho ezivela ezintweni ezibucayi, okokuqala udinga ukutadisha zonke izidingo okumele zihlangabezane ne-borage esizayo: Ukwenza umsebenzi oyinhloko - ukuqoqa ukushisa.
Indlela yokwenza i-greenhouse ngokusho kukaMitlayder: uhlelo, imidwebo, izibalo
Ngenxa yokusebenza kwayo, i-greenhouse ngokusho kukaMitlayder isanda kunqoba ukuqashelwa kwabaningi bemifino yokudla yemifino futhi iyaqhubeka nokuqhubeka njalo. Ethuthukiswa ngumchwepheshe owaziwayo waseMelika embonini yemifino, i-greenhouse yabizwa ngegama layo. Sekuyiminyaka eminengi, i-Meatlider iye yahlola ngokucophelela izinqubo zezolimo.
Ukukhiqizwa okuzimele kwe "Breadbox" ukushisa okushisa ngezandla zabo
Kunezinhlobo ezahlukene nezinhlobo zezithombo zokugcina izithombo. Enye yezinhlobo ezihambayo zokugcina izithombo yi-glasshouse "Ibhokisi lezinkwa". Ake sibheke ukuthi singenza kanjani isibamba "sesibhakabhakeni" esibamba ukushisa ngezandla zakho, ngosizo lwemidwebo, futhi uthole ukuthi yiziphi izinzuzo nezinsalela zaloluhlobo lwe-greenhouse. Incazelo kanye nezici zokuklama "I-Breadbox" - i-greenhouse, esetshenziselwa izithombo ezikhulayo, izitshalo zezimpande namahlumela okuqala.
Izici kanye nezici zokugcina izitshalo
I-greenhouse yezimboni yinsimu ebizwa ngokuthi i-garden, okusho ukuthi isakhiwo esikhulu esenzelwe ukunikeza izimo ezidingekayo zokutshala izitshalo. Inhloso nezici Sebenzisa izitshalo zokugcina izitshalo epulazini ukuze ukhule izitshalo ezahlukene kanye neminye imikhiqizo efanayo ngesikhathi singeke sikhule emasimini noma emasimini.
Izici zokufakwa nokusetshenziswa kwebhokisi lokudla okushisa "esitokisini" kusayithi
"I-breadbasket" eyaziwa yi-greenhouse, ehlukaniswa ngosayizi wayo omncane, kalula ukusebenza, futhi kulula ukufakwa. Ungakuqoqa ngokwakho uma ulandela imihlahlandlela elula. Incazelo kanye nemishini I-Greenhouse ine-size encane futhi iklanyelwe ukukhula ezinyathelweni zokuqala zezithombo, izitshalo ezimilayo nezimpande.
Indlela yokwenza ibhotela elibamba ukushisa
Ngokuvamile, balimi babhekene nesidingo sokutshala izitshalo ezindaweni zokugcina izithombo noma zokugcina izithombo. Izakhiwo ezinkulu azizona ezilula kakhulu, ngakho-ke siphakamisa ukuthi sijwayelane nendlela yokwenza i-butterfly greenhouse ngezandla zakho futhi uthuthukise imidwebo yobukhulu bayo. Incazelo kanye nezici zokuklama Esimeni esivele, umklamo ufana kakhulu nevemvane, eye yanda amaphiko ayo.
Izici zomhlangano nokusebenza kwe-greenhouse "Umhlengikazi"
I-Greenhouse "Umhlengikazi smart girl" iyona ethandwa kunazo option greenhouse izimboni ukukhiqizwa factory nge slide system. Umlimi ngamunye angaqiniseka ngezinzuzo zalesi simiso ngokufaka "uMhlengikazi" esihlokweni sakhe. Izimpawu zendawo yokushisa, ukukhethwa kwendawo yokufaka, imiyalelo eningiliziwe yomthetho, imithetho yokusebenza - konke lokhu ozothola kulokhu kubuyekezwa.
Indlela yokusebenzisa i-iodine ukulwa nokuphazamiseka okuphelile esikhathini sokushisa
Iodine ku-kit yakho yokuqala yokusiza akudingekile kuphela kuwe, kodwa ingaba yisidakamizwa esibalulekile engadini yakho. It isetshenziswa ngokumelene phytophthora nezinye izifo, kanye feedings. Ake sixoxe ngezinzuzo zayo zesayithi lakho futhi mayelana nokusetshenziswa ekulwa nokulimala okuphelile. Izakhiwo eziwusizo ensimini nasadini Sekuyisikhathi eside ukujwayela ukusebenzisa izitshalo nezomanyolo izitshalo ezitshaliwe ukuzivikela ezifweni, izinambuzane, ukukhuthaza ukukhula nokuthuthukiswa kwazo.